I-Economical PU Yesinamathisela i-J3002 yezinto ezihlanganayo, i-China Economical PU inamathela i-J3002 yabakhiqizi bezinto eziyinhlanganisela, Abahlinzeki, Fektri - iSuzhou Beecore Honeycomb Equipment Co, Ltd
Ulapha : Ikhaya>Product>Yesigcilikisha ne-Glue>Uchungechunge Olunamathelayo Lwama-Polyurethane
I-Economical PU Yesinamathisela i-J3002 yezinto eziyinhlanganisela
● I-BEECORE J3002 iyisengezo se-PU esikhethekile esiyisipesheli sesitimela.
● I-J3002 iyinhlangano enamathele kwesakhiwo se-polyurethane enezakhi ezimbili, isakhi esingu-A sakhiwa ikakhulukazi ezinhlobonhlobo zama-polyols, izithuthukisi zokubambelela nama-filler, ukubukeka kumhlophe ngokukhanyisa i-beige viscous fluid, futhi kune-thixotropy ethile; isakhi B ngokuyinhloko i-polymerization MD I uketshezi olunsundu olumnyama.
● I-adhesive isetshenziselwa ikakhulukazi ukubopha izinhlobo ezahlukahlukene zamaphaneli we-sandwich composite anjenge-aluminium (iphepha, i-aramid) paneli lezinyosi, amaphaneli ahlanganisiwe, amaphaneli ahlanzekile, amaphaneli wokuhlobisa okufudumele, amaphaneli wefenisha yekhabethe, amaphaneli emvelo (imamaphaneli e-sandwich), iminyango yes sandwich eyinhlanganisela , njll. Ingasetshenziselwa ukubopha okuhlanganisiwe kwezinsimbi ezahlukahlukene, ukhuni, umdumba, amathayili aphuculiwe, itshe, ingilazi, ipulasitiki ye-ABS nezinye izinto zokuhlobisa.
● Ukwakhiwa okuhle
● Ukuvikelwa okushisa okuphezulu
Amapharamitha wezobuchwepheshe (ahlolwe ngaphansi kuka-20-25 ° C)
Into Isakhi A Isakhi B Ngemuva kokuxuba
Color mhlophe ukukhanya beige nsundu ayisekho mhlophe
Ubuningi (g / cm3) I-1.64 ± 0.05 I-1.21 ± 0.05 I-1.52 ± 0.05
State Khipha kancane i-thixotropic Liquid Khipha kancane i-thixotropic
Ukuxuba isilinganiso 5: 01
Impilo yomsebenzi Amaminithi angu-25-30
Isikhathi sokusebenza esinconyiwe within 35mins (from mixing to finishing)
I-Temp Range for application I-5-35 ° C,65% umswakama
Okokuqala Ukubopha 5-8 hours at 25°C / 60mins at 60°C
Isikhathi sokuthola ukwelashwa okugcwele 5-7 days under room temperature / 24 hours at 60°C keep 60mins
Amandla okubuka 11-13MPa (60mins at 60°C or 3 days at 25°C)
Ukuhlolwa kwe-VOC Imvumelwano ne-GB18538 / TB3139